Elementor: လှပသော WordPress စာမျက်နှာများနှင့်ပို့စ်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်အတွက်စိတ်ကူးယဉ်အယ်ဒီတာတစ် ဦး Martech Zone
Elementor - လှပသော WordPress စာမျက်နှာများနှင့်ပို့စ်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်အတွက် Fantastic Editor တစ်ခု
စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 17, 2020 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 23, 2020 Douglas Karr
ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာငါနာရီအနည်းငယ်ယူပြီး Elementor သုံးပြီးပထမဆုံး client site ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည် WordPress လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ရှိပါက Elementor နှင့်ပတ်သက်ပြီးဆူညံသံကိုကြားဖူးပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့မှာတပ်ဆင်မှု ၂ သန်းမျှသာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းအင်ဒရူး NetGain အပေါင်းအသင်းများပလပ်ဂင်အကြောင်းပြောပြပြီးနေရာတိုင်းတွင်၎င်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အကန့်အသတ်မရှိလိုင်စင်ဝယ်ပြီးဖြစ်သည်။
WordPress သည်အတော်လေးရိုင်းစိုင်းသောတည်းဖြတ်ခြင်းစွမ်းရည်များအပေါ်တွင်အပူကိုခံစားနေရသည်။ သူတို့ဟာမကြာသေးမီကနောက်ထပ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအချို့ပေးသော block-editor editor Gutenberg ကို update လုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်စျေးကွက်ရှိပေးချေထားသောအခြားရွေးချယ်စရာများနှင့်မနီးစပ်ပါ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သူတို့ဟာဒီအဆင့်မြင့်တဲ့ plugins တွေထဲကတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်ရုံပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကငါအသုံးချခဲ့တယ် Avada ငါ၏အဖောက်သည်အားလုံးအဘို့။ ဒီဆောင်ပုဒ်ကိုပုံစံမျိုးစုံဖြင့်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ပုဒ်နှင့်အနုစိတ်ပေါင်းစပ်မှုများကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားသည်။ ၎င်းသည်နှစ်မျိုးလုံးကောင်းမွန်စွာထောက်ပံ့ထားပြီးယခင်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့မဟုတ် ၀ ယ်ယူမှုများလိုအပ်သည့်ထူးခြားသောအချက်များရှိသည်။
Elementor ကွဲပြားခြားနားသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည် plugin တစ်ခုသာဖြစ်ပြီးမည်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်မဆိုလွယ်ကူစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ဒီဖောက်သည်အတွက်ယနေ့ငါတည်ဆောက်ခဲ့သော site ပေါ်တွင်ငါ Elementor အဖွဲ့ကအကြံပြုသောအခြေခံအကြောင်းအရာကိုသုံးခဲ့သည် Elementor မင်္ဂလာပါ Theme.
ငါစေးကပ်သော menus များ, footer ဒေသများ, စိတ်ကြိုက်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများနှင့်အတူပေါင်းစည်းမှုဖွဲ့စည်းရန်နှင့်အတူအပြည့်အဝတုံ့ပြန်မှု site ကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည် ... box ကိုထဲက။ ၎င်းသည် Elementor ၏အဆင့်ဆင့်တွင်အသုံးပြုခြင်းကိုအနည်းငယ်သာပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်တင်းပလိတ်၊ အပိုင်းစွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်ဒြပ်စင်များကိုကျွန်ုပ်နားလည်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းဆိုဒ်တစ်ခုလုံးကိုဆွဲချချနိုင်ခဲ့သည်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုအချိန်ကုန်သက်သာစေတယ်။ ကုဒ်တစ်ကြောင်းတည်းကိုရော CSS ကိုတည်းဖြတ်စရာမလိုဘူး။
WordPress Popup ထုတ်ဝေရေးနည်းဥပဒေများနှင့်ဒီဇိုင်းများ
ထိုကဲ့သို့သောမယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများနှင့်ပလပ်ဂင်တစ်ခုမကြာခဏလာတတ်သည်မဟုတ်သော်လည်း Elementor တွင်အခြေအနေများ၊ အစပျိုးမှုများနှင့်အဆင့်မြင့်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသင် popups ကိုပုံနှိပ်ထုတ်လွှင့်စေလိုသည်များကိုလွယ်ကူသော interface ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
Popup လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပြင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသွင်အပြင်များပါ ၀ င်သည်
လှုပ်ရှားမှုလင့်ခ်များ - သင်၏ပရိသတ်ကို WhatsApp၊ Waze၊ Google Calendar နှင့်အခြားအက်ပ်များမှအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သည်
Countdown Widget - သင်၏ကမ်းလှမ်းချက်ကိုပြန်လည်ရေတွက်ရန် timer ကိုထည့်ခြင်းဖြင့်အရေးတကြီးသဘောထားကိုတိုးမြှင့်ပါ။
Form ဝစ်ဂျက် - နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ သင်၏ပုံစံများကို Live Elementor အယ်ဒီတာမှတိုက်ရိုက်ဖန်တီးပါ။
ကမ်းတက်စာမျက်နှာများ -သင်၏လက်ရှိ WordPress ဝဘ်ဆိုက်အတွင်းသို့ဆင်းသက်ရန်စာမျက်နှာများကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်စီမံခြင်းသည်မလွယ်ကူခဲ့ပါ။
Star Widget ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ပေးသည် - ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်၎င်းကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သင်၏လူမှုရေးအထောက်အထားအချို့ကိုသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ထည့်ပါ။
ထောက်ခံစာ Carousel ဝစ်ဂျက် - သင်၏အထောက်အကူပြုသောဖောက်သည်များအလှည့်ကျသက်သေခံလက်မှတ်ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုလူမှုရေးအထောက်အထားများကိုတိုးမြှင့်ပါ။
စိတ်ကြိုက်ပို့စ်အမျိုးအစားများ - သင်သည်သင်၏ Elementor ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် Custom Post Type များရှိနိုင်သော်လည်းထိုပို့စ်အမျိုးအစားများကို Elementor Editor ကို သုံး၍ မရပါ။ ဤအတွက်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ site တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန် post အမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
Blog များစုစည်းမှု - သင်သည်လှပသောဘလော့ဂ် archive စာမျက်နှာတစ်ခုကို Elementor ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းသင်၏ WordPress ဆက်တင်တွင်ထိုစာမျက်နှာကိုမညွှန်ပြနိုင်ပါ။ သင်ပြုလုပ်ပါကသင်၏ Elementor စာမျက်နှာပျက်သွားပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာတကယ့်ထူးထူးဆန်းဆန်းပြisနာပါ။ ကျွန်တော်တွက်ဖို့နာရီအတော်ကြာခဲ့တယ်။ အဖြစ်မကြာမီငါဘလော့ဂ်စာမျက်နှာကိုအဘယ်သူအားမျှသတ်မှတ်ထားသကဲ့သို့, အရာအားလုံးကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာ setting ကို WordPress template လုပ်ဆောင်ချက်အတော်များများမှာအသုံးပြုလို့ပဲ။ သင့်ဆိုဒ်အားမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမတားဆီးနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ထူးဆန်းသောပြissueနာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
Lightbox အထောက်အပံ့ - Popup feature သည်အလွန်အေးမြသည်၊ သို့သော်ခလုတ်တစ်ခုသာရှိသည်ဆိုပါကပြခန်းသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုရန် lightbox တစ်ခုပွင့်လာသည်။ သို့သော်စိတ်ကူးရှိပါသည် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ Add-On ဒီ feature အပြင်တခြားဒါဇင်များစွာကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။
WordPress တွင်ပရိုဂရမ်များကိုပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားပါက၎င်းသည်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းသင်သိသည်။ ကောင်းပြီ၊ Elementor သည် Mailchimp နှင့်ကြိုတင်တီထွင်ထားသောပေါင်းစပ်မှုများရှိသည်။ ActiveCampaign, ConvertKit, ကင်ပိန်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း HubSpot၊ စာဖတ်ခြင်း၊ donReach၊ ယို၊ GetResponse၊ Adobe TypeKit၊ reCAPTCHA၊ Facebook SDK၊ MailerLite၊
အားလုံး Elementor အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ
နောက်ထပ်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ Elementor တိုးချဲ့!
Ultimate Addons များ သင့်အတွက်ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ချေအသစ်များကိုဖွင့်ပေးသည့်စစ်မှန်သောဖန်တီးမှုနှင့်ထူးခြားသော Elementor ဝစ်ဂျက်များ၏တိုးပွားနေသောစာကြည့်တိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီမယုံနိုင်စရာအထုပ်တွင်ပါဝင်သည်
ဝစ်ဂျက်များနှင့်တိုးချဲ့မှုများ - သင်၏ဒီဇိုင်းစွမ်းရည်များကိုအဆင့်အသစ်တစ်ခုသို့ယူဆောင်ပေးမည့်ထူးခြားသည့် Elementor ဝစ်ဂျက် ၄၀ ကျော်ရှိသောကြီးထွားလာနေသောစာကြည့်တိုက်!
ဝဘ်ဆိုက်တင်းပလိတ်များ - သင်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုအရှိန်မြှင့်မည့်အလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပြီးအမြင်အာရုံကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့် website template ၁၀၀ ကျော်။
အပိုင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှု - ကြိုတင်တည်ဆောက်ထားသည့်အပိုင်းပိတ်ဆို့မှု ၂၀၀ ကျော်ကိုရိုးရှင်းစွာဆွဲယူခြင်း၊ ချုံ့ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင့်စာမျက်နှာအားကလစ်အနည်းငယ်ဖြင့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းကိုပေးသည်။
သင်ဟာဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်၊ လူသစ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်သည်သင်၏လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့ ်၍ အကောင်းဆုံးသောဒီဇိုင်းကိုလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထုတ်ဖော်: ငါသည်ဤဆောင်းပါး၌ငါ့တွဲဖက်လင့်ခ်ကိုအသုံးပြု။ ဂုဏ်ယူပါတယ်
Tags: elementorelementor add-ons များကိုelementor စာမျက်နှာတင်းပလိတ်များelementor ဝစ်ဂျက်လူကြိုက်များ wordpress plugin ကိုwordpress အယ်ဒီတာwordpress စာမျက်နှာဒီဇိုင်နာwordpress စာမျက်နှာအယ်ဒီတာwordpress plugin ကို